Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Hawlgalka samatabixinta Lufthansa ee Afgaanistaan ​​oo si xowli ah ku socda
Wararka Afgaanistaan • Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Crime • Jarmalka Jebinta Wararka • Wararka Dowladda • News • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Lufthansa waxay si nabadgelyo ah u duushay 1,500 oo qaxooti Afgaanistaan ​​ah
Lufthansa waxay sii wadi doontaa duulimaadyada dheeraadka ah ee Tashkent maalmaha soo socda iyadoo la kaashaneysa Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Jarmalka.
Tan iyo hal toddobaad, in ka badan 1,500 oo qof ayaa loo duuliyay Jarmalka oo laga keenay Tashkent laba iyo toban duulimaad.
Kooxda daryeelka Lufthansa waxay ilaalisaa magangalyo -doonka markay yimaadaan.
Duulimaadyo badan ayaa la qorsheeyay maalmaha soo socda.
Toddobaadkii la soo dhaafey, Lufthansa waxay diyaarinaysay diyaarad qaadeysa qaxooti ka soo jeeda gobolka Bartamaha Aasiya una socda Jarmalka. Diyaarad Airbus 340 oo ah kuwa dhaadheer ayaa kiis kasta loo adeegsadaa. Ilaa hadda, duulimaadyada maalinlaha ah waxay Frankfurt keeneen wadar ahaan in ka badan 1,500 oo qof.
Markii ay yimaadeen Frankfurt, koox taageero Lufthansa ah ayaa dadka cusub ku caawiya cunto, cabitaan iyo dhar, waxayna siiyaan daryeel caafimaad iyo nafsiyadeed oo bilow ah. Carruurta badan ee hadda ka soo degaysa Frankfurt, waxaa loo sameeyey riwaayad iyo rinjiyeyn waxaana lagu deeqay alaabta carruurtu ku ciyaarto.
Lufthansa waxaa qandaraas ka heshay dowladda Jarmalka si ay gacan uga geysato daad -gureynta qaxootiga Afgaanistaan ​​diyaaraddeeda Airbus A340. Diyaaradaha xambaara calanka Jarmalka kuma duulayaan Afgaanistaan ​​laakiin taa beddelkeeda waxay ururinayaan dadka laga saaray dalka ee Bundeswehr (ciidamada qalabka sida ee Jarmalka) oo la geeyo Doha, Qatar iyo Tashkent, Uzbekistan.